Haasi Wese Munhu Anobata Newe Ndiye Mutengi | Martech Zone
Kufambidzana kwepamhepo uye kushanya kwakasarudzika kune webhusaiti yako hazvisi hazvo vatengi vebhizimusi rako, kana kunyange vangangove vatengi. Makambani anowanzoita chikanganiso chekufungidzira kuti kushanya kwese kune webhusaiti mumwe munhu anofarira zvigadzirwa zvavo, kana kuti munhu wese anoteedzera pepa rimwe chete akagadzirira kutenga.
Kwete. Kwete zvakadaro.
Mushanyi wewebhu anogona kuve nezvikonzero zvakasiyana zvekushandisa saiti yako uye kushandisa nguva nezvako zvemukati, hapana chimwe chazvo chine chekuita nekuva mutengi chaiye. Semuenzaniso, vashanyi kune yako saiti vanogona kunge vari:
Vakwikwidzi vanochengeta ziso pauri.
Vanotsvaga Jobho vachitsvaga iri nani gig.
Vadzidzi vachiongorora pepa reti koreji.
Uye zvakadaro, vangangoita wese munhu anowira mukati mematatu aya anowanzove panjodzi yekufonerwa kana kumisikidzwa pane yeemail rondedzero.
Kuisa mushanyi wese mubhaketi revatengi inzira ine njodzi. Haisi chete yakadonhedza zviwanikwa zvekutevera mumwe nemumwe munhu anogovera yake nhamba yefoni kana email kero, asi zvinogona zvakare kugadzira zvakashata chiitiko kune vanhu vanga vasina chinangwa chekuva tarisiro yeiyo barrage yekutengesa zvinhu.
Kushandura vashanyi kune vatengi, kana kunyangwe kungoziva kuti ndevapi vashanyi vanokodzera kutendeuka, zvinoda kuti unzwisise zvakadzama zvavari. Apa ndipo apo 3D (matatu-mativi) anotungamira kurova inouya yekutamba.
Kutungamira kunyorera hakusi kutsva, asi iyo kusimuka kweBig Data yakaunza chizvarwa chitsva che3D kutungamira yekumisikidza mhinduro dziri kuwedzera hudzamu kumaitiro evashambadzi uye vezvekutengesa vanoona vatengi uye tarisiro. 3D yekurova ndiko kushanduka kwechisikigo kwedata rakakosha rawanga uchiunganidza pane ako makasitoma kwemakore, uye kurishandisa kunyatso kushandira vatengi ava uye pakupedzisira, wedzera kutengesa kwako uye wako wepazasi mutsetse.
Kunyangwe iro bhizinesi rakanangidzirwa paB2C kana B2B maratidziro ekushambadzira, 3D inotungamira kurovera inogona kuvabatsira kuyera kuti tarisiro kana mutengi anoenderana sei ne "yakanaka" yavo, vese vachitsvaga yavo nhanho yekubatana uye kuzvipira. Izvi zvinoita kuti tarisiro yako ive kune vanhu vanogona kutenga, pane kukanda yakafara-uye inodhura-mambure kusvika kune wese mushanyi uyo achangoitika kuti asvike pane yako saiti.
Kutanga, Ziva huwandu hwevanhu kana firmagraphics
Iwe uchavaka yako 3D zvibodzwa nekuzivisa mutengi wako. Iwe uchazoda kuziva "Ndiani munhu uyu? Ikambani yangu yakakodzera here? ” Rudzi rwebhizinesi rauri mariri ndirwo ruchasarudza chimiro chauchazoshandisa ku 3D zvibodzwa zvevatengi vako.
Masangano eB2C anofanirwa kutarisa nezvehuwandu hwevanhu, senge zera ravo, murume kana murume, mari, basa, chinzvimbo chewanano, huwandu hwevana, makadhi akaenzana eimba yavo, zip code, kuverenga kunyoreswa, nhengo dzemubatanidzwa uye kubatana, zvichingodaro.
Masangano eB2B anofanirwa kutarisisa firmagraphicdata, inosanganisira mari yekambani, makore mubhizinesi, huwandu hwevashandi, kuswedera kune zvimwe zvivakwa, zip kodhi, chinzvimbo chevashoma-nhamba, nzvimbo dzenzvimbo dzekushandira uye zvinhu zvakadaro.
Chikamu chechipiri che 3D kurova ndiko kubatanidzwa
Mune mamwe mazwi, iwe uchazoda kuziva kuti mutengi uyu ari kuita sei neako brand? Ivo chete vanokuona iwe pane zvekushambadzira zviratidziro? Vanotaura newe nefoni nguva dzose here? Ivo vanokutevera pa Twitter, Facebook uye Instragram uye wotarisa paFaraSquare pavanoshanyira nzvimbo yako? Ivo vanobatana newe ewebhu? Maitiro avanoita newe anogona kukanganisa hukama hwavo newe. Kuwedzera kudyidzana kwehukama kazhinji kunoreva kuwedzera hukama hwehukama.
Chechitatu, ziva kuti mutengi wako aripi muhukama hwavo newe
Kana iwe usati watove, iwe unofanirwa kukamura dhatabhesi yako maererano nehurefu hwenguva mutengi wako anga ari mutengi wako. Uyu mutengi kweupenyu hwese akatenga zvigadzirwa zvese zvaunazvo? Uyu mutengi mutsva uyo asingazive nezvese zvinopihwa nekambani yako? Sezvaunogona kufungidzira, mhando yeemail yaunotumira kumutengi weupenyu hwese inosiyana zvakanyanya neyaunotumira kune mumwe munhu pakutanga kwehukama hwake newe.
Nepo vatengesi vazhinji vachipatsanura dhatabhesi yavo nehuwandu hwevanhu kana firmagraphics chete, vanofanirwa kuve inoteerera kune yevatengi nhanho mukati mehupenyu hwehupenyu uye vimba zvakanyanya pa 3D zvibodzwa. Mutengi mutsva uyo akambotumira tsamba iwe hauzove akasimba semutengi wenguva refu akashanyira hofisi yako. Saizvozvowo, munhu wawasangana naye pakuratidzira angave ari mutengi asina kusimba pane uya akatenga chinyararire kubva kwauri kwemakore mashanu. Iwe hauzi kuziva izvo pasina 3D kurova.
ipai ose mushanyi kurapwa kwakachena-gurovhisi.
Pakati penyaya iyi yese yekushandisa 3D lead alama yekutarisa kune vashanyi vane mukana wekutenga, ndingadai ndakaremerwa kana ndikasataura kuti kubatana kwese nemushanyi kunofanirwa kuve chena-giravhosi kurapwa chiitiko - kutarisisa, hushamwari uye mhinduro -kutakurwa mukufarira kwemushanyi. Rangarira, hazvisi zvekugadzira mari yakawanda pakutengesa kwekutanga. Zviri zvekupa izvo zvinonyatsodiwa nemushanyi, zvinozoguma neruzivo rwakanaka rwevatengi nekutengesa mune ramangwana. Wedzera izvi neruremekedzo kune wese mushanyi, kunyangwe ivo vanokwikwidza, vanotsvaga basa, uye vadzidzi vekoreji. Iwe hauzomboziva kana mutsa mudiki uchizobhadhara zvikwereti gare gare.
Iwe haugone kungotsvaga akanakisa-vatengi. Unofanira kuzvisakurira. Akazviita sei? Nekuvagonesa kuti vafambe vasina mushe kuburikidza nechikamu chega chega cheupenyu, kutsvaga izvo zvirimo kana kubatana kwavanotsvaga munzira. Iri ndiro simba reRight On Interactive's Lifecycle Marketing solution: kupa masimba masangano kuti azive chaizvo kupi tarisiro kana mutengi ari muhukama hwavo nechiratidzo-kubva tarisiro kusvika kune anopenga fan- uye nemabatiro aungaita kwavari kuti vawedzere kukosha kwehupenyu.
kuburitsa: Right Pane Inopindirana mutengi wedu uye anotsigira Martech Zone. Dzidza zvakawanda nezve yavo lifecycle kushambadzira mhinduro nhasi:
Dzidza zvakawanda nezve Right On Interactive
Tags: 3d zvibodzwab2bb2cCompetitorskasitomavatengi lifecyclemutengi lifecycle kushambadzirademographicsdzidzkumwevanotsvaga basa vadzidzilead alamamushanyi wepamhepokurudyi pane kudyidzanavashanyivashanyi vewebhu
Troy Burk, CEO uye Muvambi we Right Pane Inopindirana, inozivikanwa mutungamiri wepfungwa uye mutauri pamisoro yehupenyu hwekutengesa, kushambadzira otomatiki, kutungamira zvibodzwa nekurera, uye kushambadzira email. Troy akawana degree rake reBachelor kubva kuBall State University. Anogara kuIndipolis nemukadzi wake nevana vatatu kwaanoshandira kuGreater Indianapolis Chamber of Commerce's Yenhengo yeKushambadzira Komiti uye anobatanidzwa nemitambo yevechidiki.
Vaviri Vanofanirwa-Iva NepaTwitter Zvishandiso Zvekutarisira Vateveri